. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည် -၂
အခုတခါ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်း ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေရတနာ ပရဟိတ၊ သီလရှင် စာသင်တိုက်မှ တွေ့ခဲ့ သိခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်ဝေမျှချင်ပါတယ် ..
အဲဒီကျောင်းလေးကို အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ) နှင့် ဒေါ်ယုစန္ဒာ တို့၏ တပည့်များ တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် .. အဲဒီကျောင်းမှာ အငယ်ဆုံး သီလရှင်လေးဟာ ၄နှစ်ပါ .. အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ဘ၀ရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ခံစားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ထိုကျောင်းကလေးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် .. အလွန်ကိုမှ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရုပ်ရည်လေးကလည်း အရမ်းပဲ သန့်ပြန့်လွန်းပါတယ် .. မိုးခါးတို့ ရောက်ပြီး ဘုရားခန်းထဲ ထိုင်နေတုန်း အဲ့သီလရှင်လေးက ရောက်လာပါတယ် .. ရောက်လာတာနဲ့ မျက်နှာလေးကလည်း ပြုံးလို့ ခေါ်ထိုင်တော့လည်း အသာတကြည်ပဲ လာပြီး ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေပါတော့တယ် .. စာတွေရေးတတ်ပြီလားဆိုတော့ ရေးတတ်ပြီဆိုပြီး ရေးပြသေးတယ် .. ကကြီး ခခွေးနဲ့ ဃ ကျတော့ မေ့ပါရော .. ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ မျက်စိထဲကကို မထွက်ပါဘူး .. သူလေးက ကြီးလာရင် စာရေးဆရာမဖြစ်ချင်တာတဲ့လေ .. ဘာအကြောင်းရေးချင်တာလဲဆိုတော့ ကျောင်းထိုင် ဆရာကြီးအကြောင်းကို ရေးချင်တာပါတဲ့ ..
နောက် သီလရှင်ငယ်လေးရဲ့ ဘ၀ကို သိခဲ့ရတာကတော့ သူလသားအရွယ်လေးမှာပဲ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သူ့ရဲ့ မိခင်ကိုယ်တိုင်က ခြင်းလေးထဲ ထည့်ပြီး မျှောလိုက်ရပါတယ်တဲ့ .. မိခင်နဲ့လဲ ခုထိ ပြန်မတွေ့တော့ပါဘူး .. ရေကြောင်းတလျှောက်မျောပါလာရင်း ကိုယ်တွေ ခေါင်းတွေလည်း ထိခိုက်လို့ပေါ့ .. နောက်ဆုံးမှာ နောက်ဆုံးမှာ အဒေါ်ကြီးတယောက်ရဲ့ ကယ်ဆယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ် .. အဲဒီအဒေါ်ကြီးက မွေးစားခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာတော့ ရွှေရတနာသီလရှင် ကျောင်းတိုက်ကလေးမှာ ပညာသင်ကြားနေခဲ့ပါပြီ ..
ကလေးတိုင်းက ချစ်စရာ ဂရုဏာသက်စရာ ကောင်းလွန်းပါတယ် .. မိမစုံ ဖမစုံနဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ၀င်ရောက်ခံစားရင်တောင် ရင်တွေ မောလွန်းရပါတယ် .. သနားဂရုဏာသက်ပြီးသကာလ အတွေးကတော့ အကြောင်းတရားတွေကြောင့် အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်လာရတယ် .. လူချင်းတူပေမယ့် ဘ၀ပေး အခြေအနေတွေ ကွာခြားလွန်းလှပါတယ် .. ခုအချိန် ကိုယ်တွေ လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေ ရှိတုန်း ကောင်းမွန်တာတွေ အများအကျိုးရှိမှာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားသင့်ပါတယ် .. အဲ့လိုလုပ်လို့ သူ့ပဲအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ပါအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင် သိသာလွန်းပါတယ် .. ကိုယ်တွေ ခုချိန် ပြည့်စုံချမ်းသာမနေဘူးဆိုတာ အရင်ဘ၀တွေက အကျိုးပေးနည်းခဲ့လို့ပေါ့ .. အရင့်အရင်ဘ၀တွေက ပါရမီတွေ ဖြည့်ဆည်းခဲ့သူတွေမှာတော့ ကိုယ်တွေလိုမဟုတ်ပဲ ပြည့်စုံချမ်းသာပြီး မပူမပင် နေနိုင်နေကြတယ် မဟုတ်ပါလား .. စကားလမ်းတွေကတော့ လွဲနေပါပြီ .. ကျောင်းလေးအကြောင်း ဆက်ပါဦးမယ် ..
အဲဒီကျောင်းလေးမှာ ကလေးတိုင်းကလည်း မပျော်ရွှင်ကြပြန်ပါဘူး .. တချို့က လူပြန်ထွက်ချင်တယ် .. ထွက်ပြေးချင်ကြပါတယ် .. အပြင်လောက မိဘရင်ခွင်လိုတော့ ဘယ်လွတ်လပ်ခွင့် ရှိကြပါ့မလဲ .. ဒီတော့လည်း ထွက်ပြေးချင်ကြတာ မဆန်းပါဘူး .. ဆရာကြီးတွေ အနေနဲ့က အများကို ထိန်းသိမ်းရတာမို့ ကြပ်မတ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ် .. ကြပ်မတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကလည်း ပုံလို့ပါပဲ .. ကလေးတယောက်ဆို သူ့မိခင်က မကောင်းတာလုပ်စားရတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးပါ .. ဒါပေမယ့် အဲဒီကလေးဟာ ကျောင်းမှာမပျော်ပဲ ထွက်ချင်နေပါတယ် .. အဲလိုမျိုးကျ ဆရာကြီးတွေက ဆူရ ရိုက်ရနဲ့ ဆုံးမပေးရပါတယ် .. ဒီမိန်းကလေး အကယ်၍များ ကျောင်းကထွက်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုဘ၀မျိုးရောက်မလဲ .. ဒီလိုဆိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆူတန်ဆူ ရိုက်တန်ရိုက်နဲ့ ကြပ်မတ်ရပါတယ် .. ဒီလိုပါပဲ .. တကယ့်ဘ၀တွေထဲမှာမှ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးစုံနဲ့ ဘ၀မျိုးစုံ ရှိနေပါတယ် .. အသက်ကြီးလာလေလေ ပိုမိုသိလာလေလေပါပဲ ..
ကျောင်းလေးဆီ ပုံလေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့ အလည်သွားရအောင်ပါ ..
ဆောင်ပုဒ်များ ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ် ..
ကလေးပီပီ အဆော့မက်ကြတယ် ..
ဟင်းချက်တိုင်း ဈေးရောင်းတိုင်း ဆော့နေတဲ့နေရာကို ရောက်သွားတော့ အဆော့ပျက်သွားကြတယ် .. ပြီးတော့ ဧည့်သည်တွေကို ချောင်းကြည့်နေတယ် ..
ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ပါ .. ပို့စ်ပေးပါဦးဆိုတော့ ခုလိုမျိုး ပို့စ်ပေးပါတယ် ..
ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ လူစုပေးကြပြန်တယ် ..
သူတို့လေးတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ ရောက်ခါစက မိဘနဲ့ ခွဲပြီးလာကြရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြတယ် ငိုကြတယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ ရွယ်တူလေးတွေ အစ်မ ညီမတွေလိုဖြစ်ပြီး ပျော်သွားပါတယ် တဲ့ .. ဘယ်လိုပဲ မိဘနဲ့ ခွဲနေရတယ်ဆိုပေမယ့် ချစ်ခင်ဂရုစိုက်မယ့် အစ်မ ညီမနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိနေလို့ သူတို့တွေ ပျော်ကြပါလိမ့်မယ် .. ကျောင်းမှာ အတန်းစာအပြင် ဘုရားစာကိုပါ တွဲဖက်သင်ကြားပါတယ် ..
အခွင့်အခါသင့်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီကျောင်းလေးဆီ ရောက်အောင် သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် .. အဲဒီကျောင်းလေးမှာ ဆူဆူညံညံ ကစားသံတွေ စာအံသံတွေ ကြားရပါမယ် .. ကလေးတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေ ကြားသိရပါမယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/04/2012 12:36:00 AM